Ungamtsala njani uMfazi weVirgo ngeendlela eziSebenzayo - Ihambelana Astrological Signs
Dlala Online Dating Games
Iselfowuni Iikhokelo Neendlela Zokusebenza
Ungamtsala njani uMfazi weVirgo ngeendlela eziSebenzayo
Umfazi waseVirgo ngumfazi osebenza nzima, ozolileyo, ogcinelweyo, othobekileyo nothozamileyo, oneliso elijonge umntu osemgangathweni ongenamdla wobusuku obunye. Ukwangumntu okhethiweyo, osebenzayo kwaye oneliso elibukhali ojonga iinkcukacha. Ke, ukuba ufuna ukutsala umfazi weVirgo, yiba nokuziphatha okuhle kwaye unyathele kancinci.
ukuncokola ukuba ube nesoka lakho
Ungamtsala njani uMfazi weVirgo
Ewe kunjalo, aIntombazana engumfaziuyadelelaiyahambelana ngakumbiumntu owabelana ngeempawu zakhe ezifanayo kubume beenkwenkwezi. Okwangoku, nabani na unokuba nexesha elilula lokutsala lo mfazi oqhelekileyo ukuba bayaluqonda uhlobo lwabantu abathandekayo. Kodwa ukuba ezi ndlela zokutsala aziveli ngokwendalo, kuyaxoxwa ukuba umntu angakhupha umtsalane kumfazi oneliso elibukhali kunye nokugqibelela.
IVirgo Woman kunye neCapricorn Man
I-Taurus Indoda kunye neVirgo yabasetyhini
Indlela yokutsala umfazi waseTaurus
Zilungise kakuhle kwaye uncume
Ibhinqa laseVirgo linotyekelo lokufuna ukugqibelela kwaye linomdla kubantu abacocekileyo, abacocekileyo nabaziphethe kakuhle. Xa uqala ukudibana, mjonge emehlweni, zazise, ​​uncume. Mbuze ukuba ungambiza na. Amagama ambalwa kunye noncumo kulula kwaye kulula, kodwa banokubonisa umdla wokwenene.
Yiba nokuzithemba, ububele, kwaye uncokole, kodwa ungaze unyanzele. Khumbula oko akutshoyo ukuze ukwazi ukukusebenzelaiincoko ezizayo. Mbonise ukuba ninobomi benu kunye, yakha ubuhlobo, ukuthembana kunye nentlonipho. Yakha ubuhlobo obunesithembiso sothando.
Kumfazi weVirgo, ayisiyiyo le nto uyithethayo, kodwa indlela oyithetha ngayo, ibalulekile. Ke jolisa kuye, sebenzisa igama elithethiweyo kunye nolwimi lomzimba, kwaye ume kancinci ukumnika ixesha lokuthetha. Sukusebenzisa ii-clichés okanye i-slang, kwaye uyazi ukuba uthetha ngantoni. Umfazi waseVirgo unemfesane, kwaye oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uphumelele ingqondo yakhe ngaphambi kokuba uphumelele intliziyo yakhe.
Bonisa isimilo sakho kunye nezakhono zentlalo. Yintokazi endala engakhathaliyo ukuthandana. Ukuba uyambuza, yenza umhla ocwangcisiweyo. Gcina ixesha, umphathele iintyatyambo, kwaye umse kwindawo yokutyela emnandi. Ukuba konke kuhamba kakuhle, phelisa ngokuhlwa kwindawo yokutya okanye kwivenkile yekofu kwaye ubonise izakhono zakho zokuncokola. Emva koko mfikise ekhaya ngokukhuselekileyo abd sukutyhala ngesondo. Landela umnxeba ecaleni kwakho umxelele ukuba uyonwabele inkampani yakhe.
Cwangcisa imihla yexa elizayo unaye engqondweni
Umfazi waseVirgo uhlala engumntu osebenza nzima kwaye onwabile ukuba ubomi bakhe bucwangcisiwe kwaye bulungisiwe, oko kuthetha ukuba akakho kakhulu kwizimanga. Ke, qiniseka ukuba ucwangcisa kwangaphambili ukuze akwazi ukukufaka ipensile kwikhalenda yakhe. Kwakhona, gcinani engqondweni xa nicwangcisa imihla yenu ukuba ikhetha nento eyityayo kwaye inovakalelo kwimeko yayo. Akakwazi ukuthwala iindawo ezimdaka, ezixakekileyo, ezinomsindo, okanye ezixineneyo.
Bonisa amandla akho angaphakathi kunye nengqibelelo ngokusoloko ucocekile, umphathe ngentlonipho kuzo zonke iimeko, kwaye ungaze, ungaze unyanzelise okanye unyanzele.
Ngenxa yentswelo yomfazi weVirgo yokugqibelela kunye nobume bakhe obuntsonkothileyo, unokulindela ukugxekwa. Kungcono ukhumbule ukuba akakubeki phantsi kuba, engqondweni yakhe, ukunceda ukuba ube ngumntu ongcono. Ukuba unengxaki nokugxeka okwakhayo, kuyakubakho ingxaki.
Yiba ngumhlobo wezilwanyana
Umfazi weVirgo uziva esekhaya xa enezilwanyana. Oku kuthetha ukuba uhlala nomnye okanye ababini okanye nangaphezulu kwaye ubaphatha bonke ngokungathi ngabantwana bakhe. Ukuba unezilwanyana ezifuywayo, qiniseka ukuba uthetha ngazo, uzise ukuze udibane naye, kwaye ubonise ngazo. Ukuba ngumthandi wezilwanyana ngokuqinisekileyo kuya kumtsala. Nangona kunjalo, ukuba awunasilwanyana-sasekhaya, mhlawumbi uchitha ixesha lakho uzama ukutsala umfazi weVirgo.
Mnike indawo kwaye ube nomonde
Umfazi weVirgo ubalulekile, ulumkile, ufuna iqabane lobomi bonke. Ufuna ukuhamba kancinci xa kuziwa kwezothando kwaye ithuku lakhe lokuqala kukubaleka kwiimvakalelo zothando. Ke mnike ixesha kunye nendawo kwaye ungawunyanzeli umcimbi. Ubomi bakhe bu-odolwe kakuhle kwaye ubandakanyeka kwezothando nomntu ongenakulunga ngokulula ebomini bakhe unokucaphukisa inqwelo yakhe yeapile. Xa kufikwa kuthando, yonke into ikwixesha lakhe.
Ukugcina uMfazi weVirgo onwabile
Ukuba uthandana umfazi Virgo, akuyi kuba kudala ngaphambi kokuba ufumanise ukuba bathathe ubudlelwane nzulu kakhulu. Ukuba uyafuna ukumgcine onwabileKuya kufuneka uluthathe njengobalulekileyo ubudlelwane. Ulindele ukuba iqabane lakhe libe liqabane lakhe kwaye linyaniseke kwaye lithembeke njengaye. Ewe akunakulimaza ukuba uqhubeka usenza ezo zinto zikutsalele kuye kwasekuqaleni.
Izinto zokutsala iAstrology: UVenus noMars
Wonke umfazi weVirgo ungaphezulu kakhulu komqondiso wakhe weLanga. Unazo ezinye iiplanethi ezinezinye iimpawu ezinxulumene nomqondiso weenkwenkwezi. Ukuba ufuna ngokungazenzisiyo ukuba uthanda ntoni umfazi waseVirgo kunye nendlela onokumtsala ngayo, kuya kufuneka ujonge ezona zinto ziphambili zokutsala ukuvumisa ngeenkwenkwezi: IimpawuInyanga yakhe, njengoUVenus, iplanethi yothando, kunyeUMars, iplanethi yesini, Kwitshathi yakhe yokuzalwa.
Iimoto Izilayidi Ikhadi Making Ngaphezulu Size Slideshows Abafazi Ifashoniimifanekiso Umtshato Ushishino
I-Gem Stones And Gem Stone Jew Jewelry
Ukufa Kwinkcubeko Kuhlabathi Kwehlabathi
Ukufumana U Umsebenzi
Ukukhetha A Camera
I-African American Izinwele Iimpawu
Eyona nto ibanjiweyo kwiBhola ekhatywayo
Iingcebiso zokuNxiba ngokuNxiba kunye neeMbono
Ukugula kweekati kunye neempawu
Iziseko zebhayoloji yeeSeli zezilwanyana
yintoni ileta yokudlulisa
ithambile yambethe ingqolowa yenja esikiweyo
indlela yokubeka i-bandana
wenza njani umntu obhinqileyo xa esothandweni
ukuvala njani incwadi yeshishini
indlela yokwenza uphando ngesihloko kwi-intanethi
Anti Iglasi Ne China
Zintandathu Iiflegi Iitheme Parks
Engagementment Rings Slideshows
Izixhobo Zeski Izixhobo